🥇 Kuverenga uye kurongeka kwekufambisa
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 734
Vhidhiyo yekuverenga uye kurongeka kwekufambisa
Raira kuverenga uye kurongeka kwekufambisa
Iyo USU-Soft michina yekutakura nhumbi yekufambisa manejimendi chirongwa chinogadzirisa akati wandei akakosha mabasa kamwechete. Inobatsira kukwidzirisa basa resangano nekugadzirisa zvaro zvega zvebhizinesi. Iyo software inoita kuti accounting yemari uye yekuchengetera otomatiki, uye basa nemagwaro rinova nyore uye nekukurumidza. Chiito chega chega cheyese nyanzvi nyanzvi yakanyorwa muhurongwa hwekuverenga accounting, uyezve yozounganidzwa uye kuongororwa maererano nezvimwe zviito. Iyi ndiyo hwaro hwehurongwa hwakadzama hwekuongorora, iyo data iyo yakakosha zvakanyanya kune chaiyo manejimendi sarudzo sarudzo. Chirongwa chesangano accounting kubva kukambani yedu ndechechokwadi chekubatsira manejimendi esangano rako. Muchokwadi, inokupa iwe kuyerera kwekushanda kweruzivo nezve zvese zvinoitika mune rako bhizinesi. Kutakura kwekufambisa inzira yakasarudzika yekutakura sevhisi. Kuti uite zvakanyanya kudhura uye zvinobatsira, unofanirwa kutarisisa kune imwe neimwe maitiro. Kana sangano riine mepu dzisina kukombwa dzemigwagwa, saka nzira dzekutakura zvinhu dzinoshandiswa zvisina musoro, uye mutengo unokwira. Mukushaikwa kwekudzora, marori anogona kazhinji kuita asina basa kana kushandiswa kugadzira mari isiri pamutemo yevashandi. Zvekufambisa zvinofanirwa kuve zvakarongwa zvakajeka, uye iyo accounting accounting system inogona kubatsira mune izvi.
Iyo otomatiki nhumbi kutakura manejimendi manejimendi esangano accounting ndeye mukana wekuchengetedza hukama hwakanakisisa nevatengi, kudzidza kwavo kudiwa uye zvishuwo. Iyo purogiramu yekuverenga accounting inogona kuongorora zvinhu, zvibvumirano, uye haizombobvumire iwe kutyora mazwi echibvumirano, kungave maererano nehunhu hwebasa, kana maererano nenguva. Yega yekutakura nhumbi ichave nemushandi ane huchokwadi anova nechokwadi chekuti nhumbi imwe neimwe inotumirwa uye inogamuchirwa nenguva. Kugadzirwa kweanodzora masisitimu emigwagwa yekutakura zvinhu kwakatanga kupera kwezana ramakore rapfuura. Uye pakutanga vaive mapurogiramu echinyakare. Nekuvandudzwa kwekutaurirana kwemotokari, kuzadza kwemusika nekutakura, izvo zvinodikanwa zvechirongwa chekuverenga pamusoro pekutonga kwesangano zvachinjawo. Nhasi, mubhizimusi rekutakura zvinhu, munhu haakwanise kuita pasina chirongwa chine simba, chinogadzira chekuverenga accounting icho chinogona kuunza zvakazara kurongeka kune zvese.
Chii chinogona kupihwa manejimendi manejimendi kune rese sangano rekutakura mukuwedzera kune otomatiki kutonga pamusoro pemigwagwa yekufambisa uye nhumbi? Chekutanga pane zvese, mhando yebasa inokura, uye vatengi vanozviona izvi nekukurumidza. Kugadziridza kwekufambisa mutengo kunosvika 25% yatove mukati memwedzi mitanhatu yekutanga yekushandisa iyo otomatiki system. Iyo nguva inotora kufamba kuburikidza neketani yezvigadzirwa inoderedzwa nemari yakafanana. Iyo otomatiki chirongwa chesangano accounting chinokutendera iwe kudzikisa mileage yekutakura nzira neinenge 15%, uye nzira yekuronga yekuendesa inoderedzwa ne95%. Iyo software inobatsira kuti manejimendi abudirire, nekuti muchokwadi ichapindura mibvunzo yakawanda inowanzo bvunzwa nenyanzvi mumunda wekufambisa manejimendi - zvinotora nguva yakadii kuronga nzira uye kuronga kutakura nhumbi? Nzira yekuderedza sei mutengo wekufambisa mumigwagwa, uku uchiwedzera purofiti yemasevhisi? Chii chinonyanya kubatsira - kushandisa yako wega zviwanikwa zvemota kana kushandisa ekufambisa masevhisi emumwe wako? Iyo rese network inoshanda, uye mutambo wacho wakakosha kenduru here?
Basa rakashandurwa harisi rekushandisa kwemaspredishiti eExcel sevamwe vanhu vanofunga. Real automation inoitwa kuburikidza nekushandisa kwepamberi system. Uye inofanirwa kunge ichikurumidza, yakarurama, isina kukanganiswa, inoshanda, yakavimbika, ichivimbisa kumhanya kwakanyanya kwekuverenga. Maitiro ekuishandisa haafanire kuve akaomarara; isu tinosarudza nzvimbo dzakareruka dzisina kutakurwa nezvinovhiringidza zvisina basa. Imwe yeakanakisa zvirongwa zvekutakura zvinhu logistics ndeye USU-Soft. Iyo inogadzirwa nevakagadziri vane ruzivo vakaedza kutora huwandu hwehuwandu hwezvinodiwa uye maficha eaya marudzi ekufambisa, uye nekudaro chirongwa chekuronga accounting chakanakisa pakuongorora nekugadzirisa mafambisirwo ekufambisa kana uchishanda nemutoro uye nemigwagwa yekufambisa. Iyo otomatiki USU-Soft system inobatsira kuronga nzira, uchifunga zvese zvinhu - kubva panguva yakapihwa kurongeka kune iyo mhando yekutakura. Ichakubatsira iwe kuti ugamuchire mishumo chero nguva. Automated accounting uye kutonga kwemari, zvoga imba yekuchengetera, uye gwaro kuyerera - izvi zvinongova chikamu chevapfumi uye zvakafara mashandiro eUSU-Soft chirongwa chekuronga accounting. Maitiro ekuitisa zvifambiso anokurumidza, nekuti kufamba kwega kwega mota kuri nyore kuteedzera.
Iyo otomatiki yekudzora system inoderedza iwo mutoro webasa kune vashandi nekudzora huwandu hwezvisungo zvechiito zviito Chero basa kubva pakuronga sevhisi kusvika pakuitwa kwayo zvirokwazvo rinokurumidza. Iyo sisitimu inobatsira kuvandudza manejimendi ekutakura maitiro. Izvo hazvizotore nguva yakawandisa kuti kambani ive mutungamiri muchikamu chayo, uye maererano nehunhu hwekutakura zvinhu, une chokwadi chekusaenzana. Panguva imwecheteyo, iyo system yekutonga haizokanganisa bhajeti rekambani. Iko hakuna kudikanwa kwekubhadhara mari yekunyorera kwazviri, sezvo mutengo werezinesi wakaringana.
Iyo software inogadzira yakadzama uye yakajeka vatengi dhatabhesi nerondedzero yechibvumirano chimwe nechimwe uye imwe neimwe yakambotumirwa nhumbi. Izvi zvinofambisa kusangana kwakasarudzika nemutengi wega wega. Iyo purogiramu yekuverenga accounting inobatsira kukwidziridza izvo zvinotengwa nekambani kune zvido zvadzo. Icharatidza mari, zvido, mamiriro akanakisa evanopa kupa kambani yemotokari mukana wekudzikisa mutengo. Kudzora pane imba yekuchengetera kunobatsira kutumira uye kuburitsa panguva uye nekufunga kufamba kwechikamu chega chega chega, mafuta. Nharembozha mashandisiro emidziyo yemagetsi, ayo anogona kuita sarudzo kuwedzera komputa system, zvinobatsira munyaya dzeremote control, pamwe nekuita kuti kutaurirana pakati pevashandi vekambani nevatengi vevashandi vekutakura zvinhu kuve nyore. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nezve nuances yebhizimusi bhizimusi, nzira dzekukwirisa kutakurwa kwezvinhu kubva mubhaibheri remutungamiriri wazvino. Yayo yakagadziridzwa vhezheni ichabatsira director kutungamira bhizinesi kuti ribudirire.